SAMBAVA : Rarahan’ny jiolahy fampatoriana ny sakafon’ireo olona horobaina
Tsy mitsahatra mitady fomba vaovao hanamora ny asa ratsy ataony ireo jiolahy. Tra-tehaky ny Zandary tao an-tampon-tanànan’i Sambava ireo andian-jiolahy mampiasa fanafody famosaviana ireo olona horobaina mba hahatonga azy ireo tsy hatsiaro tena. 18 septembre 2020
Maro ireo olona nitondra fitarainana mahakasika ny tranga tao amin’ity Distrika ity, ka tsy ela dia nanao fikarohana ny Zandary ary nahazo vokatra. Lehilahy miisa telo araka izany no voasambotra, sarona avokoa ireo fitaovana nampiasain’izy ireo toy ny basy vita gasy, antsy, sabatra, baramina, “moutsakou” ary ireo fanafody fampatoriana tao anaty boaty maromaro. Araka ny fanazavana voaray hatrany, dia mitety trano isaky ny fokontany izy ireo mitondra karazana entana amidy toy ny ranomanitra sy kojakoja maro samihafa mba hoentiny handrebirebena ny sain’olona mba hitangorona.
Ireo jiolahy sasany amin’izay fotoana izay manararaotra misava any an-dakozia mandraraka fanafody mahery vaika ao anaty sakafo andrahoina sy amin’ireo daban-drano. Rehefa vita izany dia lasa ireto farany ka miverina rehefa tonga ny alina mba hangalatra lavanila, vola sy firavaka sarobidy irony. Nandeha ny andro maromaro ka nahatsikaritra ny fomba ratsin’izy ireo ny ankabeazan’ny fokonolona.
Raha ny loharanom-baovao voaray ny 14 septambra lasa teo iny izao, tao amin’ny Fokontany Belaloana, Kaominina Ambodiampana dia tokantrano iray no notafihin’izy ireo. Soa ihany fa tsy mbola nisakafo na koa nisotro rano ireo olona tao an-trano, ka mailo tamin’ ny fikasan-dratsin’ireo mpandroba nandritra ny alina. Avy hatrany dia niantso ny mpitandro filaminana izy ireo mba hizaha ny raharaha, ka tratra ambodiomby ny iray tamin’ireo jiolahy tamin’izany. Ity farany indray avy eo no nanondro ny namany mpiray tsikombakomba taminy ary nilaza ny zavatra fataon’ izy ireo hatrizay.
Olona fito nalefa eny Tsiafahy, vehivavy iray notazomina eny Antanimora FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (1175) 11 janvier 2021 Mety hiafara amin’ny fanenjehana lehilahy iray any Mayotte FANDRANGITANA ADIM-POKO (121) 11 janvier 2021 Tantsambo nitsabo tena nasaina nandohalika avy eo notifirina FAHADISOANA TOMBANTOMBANA (113) 13 janvier 2021 Polisy nandeha môtô maty nohitsahin’ny kamiao LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TENY MAHAZO (80) 11 janvier 2021 Lahiantitra 60 taona nanolan-jaza 5 taona VOHIDROTRA TOAMASINA II (76) 14 janvier 2021 Nilaza ho tsy tompon’antoka koa ny Fadintseranana FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (73) 13 janvier 2021